Kuuriyada Koonfureed Oo Gogol Nabadeed U Fidisay Dhigiisa Waqooyi Ee Kim Jong-un. | Awdalmedia.com
Kuuriyada Koonfureed Oo Gogol Nabadeed U Fidisay Dhigiisa Waqooyi Ee Kim Jong-un.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa 9-ka bishan gogol nabadeed u fidishay maamulka Pyongyang, si ay uga wada hadlaan ka qeybgalka ciyaaraha Olympic-ga xagaaga ee 2018-ka.
Arrintan ayaa imaaneyso ka dib markii hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay in uu doonayo in koox uu u diro Kuuriyada Koonfureed si ay uga qeybgalaan ciyaaraha la qabanayo bisha Febraayo ee sannadkan.
Wuxuu Kim sheegay in labada dhinac ay "si degdeg ah uga wada hadli doonaan suuragalnimada arrinta".
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed wuxuu horay u sheegay in dalabka uu fursad u noqonayo in wax laga qabto xiisadda aadka u saraysa ee labada dal ka dhexeysa.
Wasiir ka tirsan dowladda Kuuriyaada Koonfureed, Cho Myoung-gyon, ayaa soo jeediyay in wakiillada labada dhinac ay ku kulmaan Panmunjom, oo ah meel loogu yeero "tuulada xabad joojinta".
Tuulada waa mid si aad ah loo ilaaliyo, dhexdeedana looma ogola militari. Waxay halkaasi u tahay goobta ay labada Kuuriya ku qabsadaan wada hadallada.
"Waxaan rajeyneynaa in Koonfurta iyo Waqooyiga ay si toos ah isu hor fariistaan, ayna ka wada xaajoodaan in kooxda Kuuriyada Waqooyi ay ka qeybgalaan ciyaaraha iyo wanaajinta danaha guud oo ah xiriir wanaagsan oo ay wada yeeshaan labada waddan," ayuu yiri Cho.
Wali ma cadda dadka ka qeybgalaya wadahadallada la soo jeediyay in la qabto 9-ka bishan January, Kuuriyada Waqooyi dhankeedana weli kamaysan hadlin gogosha loo fidiyay.
Kullankii heerka sare ee ugu dambeeyay wuxuu dhacay bishii Desembar 2015-kii. Shirkaasi wuxuu dhammaaday natiijo la'aaan, ajandayaashii looga hadlayna lama shaacin.
Kuuriyada Waqooyi waxay labadii sano ee la soo dhaafay, si xowli ah u hormarineysay hubkeeda wax gumaada ee nukliyerka, inkastoo cunna qabateyn caalami ah la saaray.
Kullan heer wasiirro ahaa oo uu qabtay madaxweyne Moon Jae-in wuxuu ku sheegay in uu soo dhoweynayo hadalkii Kim Jong-un.
Mr Moon wuxuu tilmaamay in isaga uu horay u soo jeediyay in ciyaaraha Olympic-ga ay "fursad aasaasi ah" u noqdaan u dhaqaaqidda dhanka nabadda.